Wadooyinka Qaar Ee Muqdisho Oo Maanta Xiran iyo Dadkii iyo Gaadiidkii oo Xaniban. – Hornafrik Media Network
Wadooyin muhiim ah oo ka mid ah kuwa Muqdisho ayaa Maanta xiran kuwaas oo loo diiday in ay isticmaalaan Gaadiidka noocyadiisa kala duwan.
Wadooyinka muhiimka ah ee xiran ayaa waxaa ka mid ah wadada Maka Al-Mukarama, ilaa Wadada aada dhanka Tarabuunka ee degmada hodan.
Xeritaanka Wadooyinkaas ayaa waxaa sabab looga dhigay Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo la filayo in waqtiyada nasoo aadan uu booqdo Xerada Generaal Golden halkaas oo Ciidamo farabadan oo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya ay ku jiraan.
Xasan Cali Kheyre Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa khudbad dheer oo dardaaran u badan u jeedin doona ciidamadaas oo la filayo in ay ka qeyb qaataan dagaalkii uu iclaamiyay madaxweyne Farmaajo.
Qaar ka mida Xaafadaha ku dhow dhow Wadooyinka la xiray ayaa la waayay meel la marsiiyo Haween Fool ah, kuwaasoo ku dhalay Jidadka Muqdisho, Waxaana mid ka mida Haweenkaasi markii ay dhashay kadib ay gashay Koomo, iyadoona goobta looga qaaday Gaadiidka Ambalaasta ah ee Booliska.
Ciidamadda Ammaanka Somalia ayaa Xeeladda ugu saraysay ee ay u isticmaalaan Sugidda Ammaanka waxay tahay inay xiraan Jidadka Halbowlaha u ah Isu Socodka Muqdisho, iyadoona ay taasi caqabad ku noqoto Shacabka Soomaaliyeed.